Bageriet Björkaholm | Tyelela uHultsfred
Ivenkile yokubhaka iBjörkaholm
ekhaya » Yitya usele » Ikhefi » Ivenkile yokubhaka iBjörkaholm
Phakathi kweMarlilla kunye neVirserum uyakufumana ilali encinci Flaten kunye neBageriet Björkaholm.
Apha ubhaka kwinqanaba elincinci kunye nomgangatho ophezulu wezithako. Imiqulu yesonka, ii-baguettes, ii-pretzels kunye nesonka esimuncu ngesipele okanye umgubo weerayi.
Iipitsa zase-Italiyane okanye zaseFrance kunye neflammkuchen kwi-organic spelled okanye umgubo we-rye.
Kuzo zonke iimveliso sisebenzisa kuphela umgubo ophezulu opelweyo. Ingakumbi inyama yaseSweden kunye namakhowa avela eSweden, ityuwa yolwandle evela kwiAtlantic kunye neoyile yomnquma ekumgangatho ophezulu
Nesosi yetumato njengesiseko (esifakwe kuzo zonke ii-pizza), ham, salami, mozzarella cheese, olive, Jerusalem artichoke, pepper, pineapple, tuna, spinach, feta, mushroom, ham eyomileyo, arugula nokunye okuninzi ngokweminqweno yakho.
Ukusika okubandayo kunokukhethwa ngokwakho xa u-odola ukuba uyafuna. Ukuba unobunzima bokukhetha, unoku-odola i-Björkaholm ekhethekileyo.
Nesosi yetumato njengesiseko (esifakwe kuzo zonke ii-pizza), ham, salami, mozzarella cheese, olive, Jerusalem artichoke, pepper, pineapple, tuna, spinach, feta, mushroom, ham eyomileyo, arugula nokunye okuninzi ngokweminqweno yakho. Kukho ukhetho lwemifuno, i-gluten-free kunye ne-lactose-free.
I-Flammkuchen yintlukwano ye-pizza evela eFrance ene-creme fraiche, itswele yesilivere kunye nebhekoni.
Uku-odola kwangaphambili kwesonka kunye nepitsa kuphela. Kukhethwa usuku olungaphambili.
NgoMvulo: KuvaliweNgoLwesibini: KuvaliweNgoLwesithathu: 16-20NgoLwesine: 16-20NgoLwesihlanu: 16-20NgoMgqibelo: 16-20NgeCawa: 16-20
Iflethi okanye indlu ekwicomplex 14, 570 81 UJärnforsen, Sverige
4.9 ngaphandle kwe-5.0
36 uphononongo kuGoogle
070-252 82 75
"I-pizzeria eyahlukileyo" phakathi ehlathini! Ipitsa elungileyo kakhulu eyenziwe ekhaya! Itafile ngaphandle kunye netafile ngaphakathi. Kufanelekile ukuzama!
Amava amnandi amkelekile ukubuyela apha, kodwa khumbula ukubhukisha itafile kwangaphambili.
Kumnandi kwaye kunamava angaphezu kwesiqhelo. Kucetyiswa kakhulu.
5/5 2 kwiinyanga ezidlulileyo
Indawo entle eparadesi kunye nepitsa elungileyo! Enkosi ngokubakho apho!
5/5 kunyaka ophelileyo
Kufike. Iipizza zabantu ababini. Biza kwangaphambili!
Indawo yokutyela eLönnebergaboa
Indawo yokutyela eBambugården
Zonke iivenkile zokutyela